ỊGBA AFA N'ALA IGBO | Igboniile
ỊGBA AFA N'ALA IGBO
Sat, 11/19/2016 - 16:00 | Site Manager
-Ndị Nchọcha bụ: Orji Favour O., Okoye Ukamaka, Ofuluchi Emeka, Okeke Mmesoma, Okafor Joy, Onuzulike Miracle, na Okonkwo Chinaza (Community Secondary School, Agulu)
Ịgba afa so n’otu n’ime omenala ndị Igbo kwenyere na ya. Ndị Igbo kwenyere na ịgba afa dị mma, iji chọpụta ihe ụfọdụ mere ha, maọbụ ọdachị dịịrị ha maọbụ nke ka na-eme ha.
Ndị ọrụ ịgba afa dịịrị bụ ndị dibịa afa. Ha na-agba afa site n’ịjụta ndị mmụọ maọbụ ndị nna nna ha ihe kpatara onye, ndị, maọbụ obodo ji nọrọ n’ụdị ọnọdụ ha nọ n’ime ya.
Otu ihe ịrịba ama a ga-amakwa bụ na ọ bụ ihe adịghị etu o kwesịrị ịdị, na-ebute ịga gba afa, makana “onye ya na chi ya dị na mma ọ gaje be dibịa achọ onye?” Mkpa dibịa anaghị akpa onye ahụ di ike dịka ndị gboo na-ekwu n’okwu. Igbo kwenyere na ndị dibịa afa na-achọpụta ihe zoro ezo, ebe ọ bụ na ha bụ anya na-ahụ mụọ. o nwere ọtụtụ nsogbu maọbụ ọdachi na-akpata ndị Igbo ji aga-agba afa, ka e were mara ihe kpatara ihe ndị ahụ.
IHE NA-EWETA ỊGBA AFA
Ihe ndị na-eweta ịga gba afa gụnyere:
1.	Ọnwụ ike
2.	Mmadu abaghị uru.
3.	Ezinaụlọ anaghị aga n’ihu; o nweghi onye nwere ihe ọ na-emetụ aka na-aga nke ọma.
4.	Oke ọnwụ ịdị n’obodo.
5.	Atụghị ime atụ maọlị.
6.	A tụọ ma a mụghị
7.	Aṅụ ịgbachi ụzọ maọbụ ezinaụlọ mmadụ.
8.	A na-agba afa ịgụ oge a mụrụ nwa ọhụrụ iji mata onye lọọrọ ya ụwa.
9.	Mmadụ na-arịa oke ọrịa, a ga-agba afa ịma ihe kpatara ya.
10.	Di na-abịara nwanyị, a ga-agba afa ka a mara ma ọ bụkwa di ya.
11.	Nwata a mụrụ ọhụrụ ịrịa oke ọrịa.
12.	Mmadụ ịnọkata pụọ ara ọcha wdg.
IHE NDỊ DIBỊA JI AGBA AFA
1.	Ọmụ nkwụ.
3.	Mmanya ọcha.
4.	Ugbene ọkụkọ.
5.	Uriom ọkụkọ.
8.	Ego ayọrọ.
10.	Afụ na kọbọ.
11.	Ogene ọ ga na-akụ.
12.	Mbe, wdg.
URU ỊGBA AFA BARA
1.	Ọ na-eme ka mmadụ mara ihe dịịrị ya n’ọdịniihu.
2.	Dibịa na-agba afa na-enyere ndị mmadụ aka ime ihe ha kwesịrị ime na oge ha kwesịrị ime ya.
3.	Ndị obodo na-esi na dibịa na-agba afa amata mgbe ihe mberede nwere ike ịdakwasị obodo, were chọwa ụzọ ha ga-esi gbochi ya dịka:
a.	ụganị ịdakwasị obodo.
b.	Obodo ọzọ ịwakpo ha agha dgz.
4.	Dibịa na-agba afa na-enyere ndị mmadụ aka ime ihe ha kwesịrị ime na oge ha kwesịrị ime ya.
5.	E nwere ike isi n’aka ndị dibịa na-agba afa nweta ntụziaka ime ihe ụfọdụ.
6.	Ịgba afa na-enye mmadụ maọbụ obodo obi isi ike.
7.	Dibịa na-agba afa nwere ike inyekwa mmadụ ndụmọdụ.
8.	E nwere ike isi n’ịgba afa mara ihe na-eme n’obodo ọzọ.
9.	E nwere ike isi n’ịgba afa mara ihe mmadụ bu n’uche.
10.	Dibịa na-agba afa nwere ike ịhụ ihe kpatara mmadụ jiri nwe nsogbu.
1.	Afa na-agharịpụ mmadụ oge ụfọdụ.
2.	Ụfọdụ ndị dibịa na-agba afa ji ya akpa ego.
3.	Ụfọdụ abụghị ezigbo dibịa afa.
4.	Ụfọdụ na-agba afa ụgha.
5.	Dibịa na-agba afa anaghị agwọ ọrịa.
6.	A na-emefu ego n’ịgba afa.
Ịgba afa n’ala Igbo bara nnukwu uru. Ọ bụ ụzọ e si eme ka obi mmadụ dajụọ site n’ịmata ebe nsogbu siri malite, na ụzọ a ga-esi chụọ nsogbu ahụ ọsọ ụkwụ eru ala.
N’ala Igbo a na-agba afa n’obodo dị iche iche. Dibịa bekee emelighị ka ịgba afa nwụọ.